ISEBOX: Famoahana sy fizarana atiny horonantsary | Martech Zone
ISEBOX mamela ireo masoivoho sy marika hamoaka, hamoaka ary hizara sary, antontan-taratasy, raki-peo, kaody fametrahana ary maro hafa amin'ny a pejy tokana. Ny pejy itodiana dia azo arovana tenimiafina na misokatra ho an'ny besinimaro. Ny rakitra horonantsary nakarina dia mety ho lehibe 5GB isaky ny rakitra ary azon'ny client na HQ alefa amin'ny haino aman-jery na amin'ny finday rehetra ny fampitam-baovao nefa tsy mila fampidinana, mpilalao, fidirana FTP, sns.
Ireo mpanjifan'ny ISEBOX dia mampiasa ny sehatra tokana amin'ny fizarana fizarana horonan-tsary, famoahana ampahibemaso multimedia, kitapo marika, tatitra an-gazety ary ho toy ny fitaovana fizarana fananana anatiny na tranomboky atiny.
ISEBOX singa lehibe ho an'ny atiny sy ny famoahana:
Ny atiny rehetra, toerana iray - Ampidiro ao amin'ny ISEBOX ny sary, horonan-tsary, audio ary antontan-taratasy ary zarao amin'ny ekipanao, ny mpanjifanao, ny mpanao gazety ary ny media. Ny zava-drehetra dia azo zahana sy alaina amin'ny toerana iray ihany. URL iray dia mandefa ny zava-drehetra amin'ny toerana iray.
HD Fanelezana sy fizarana horonantsary - Tsinjara ny rakitra video hatramin'ny kalitaon'ny HD - fonosana voahitsy na atiny b-horonan-tsary. Azo alaina ny rakitrao horonan-tsary feno, ary koa mamorona endrika MP4 sy FLV ambany ambany. Tsy misy intsony ny olana momba ny famerenana sy famerenana rakitra.
Mampakatra rakitra lehibe - Ampiasao ny ISEBOX's Custom File Uploader namboarina manokana, ampidiro ary zarao ny habe tokana hatramin'ny 5GB habe nefa tsy mikorontana amin'ny FTP sy ny fidirana sarotra. Tsy afaka manao izany amin'ny mailaka, WeTransfer na YouSendIt ianao. Ary afaka mampakatra rakitra maro araka izay itiavanao azy ianao.
Misintona ary manara-maso ny fanarahan-dia - ISEBOX dia manara-maso iza marina no misintona ny atiny - manome ny anarany, mailaka, mpampiasa, lohateny ary maro hafa - izany rehetra izany dia ao anaty tatitra milamina ao amin'ny dasbor anao. ISEBOX koa hilaza aminao hoe iza amin'ireo horonan-tsary URL no nampidirina, ary ahoana ny fomba fiasan'izy ireo.
Tatitra sy Analytics - Fandrefesana ny fahombiazan'ny ISEBOX Reports sy ny Analytics. Fantaro hoe firy ny fampidinana ary avy amin'iza, ny tsikera pejy, ny fifamoivoizana, ny atiny malaza indrindra, ary ny fiantraikan'ny media sosialy (fizarana, Tiana, Tweet, sns.). Antsika Analytics ny motera dia hanome anao fampahalalana bebe kokoa noho Google - anao ny angona fa tsy izy ireo. Raha te hampiditra avo roa heny ny Google Analytics ID ianao dia azonao atao koa izany.
Dashboard iraisan'ny fiaraha-miasa mamela anao sy ny ekipanao hiara-miasa, miaraka amin'ny ambaratonga fahazoan-dàlana isan-karazany, amin'ny atiny sy ny tatitra. Raha miara-miasa amin'ny mpanjifa ianao dia azonao omena azy ireo ihany koa ny dashboard anao, ahafahanao miasa manerana azy rehetra.
Mobile - Voalamina ao anaty HTML5 ny zava-drehetra hahazoana antoka fa mifanentana amin'ireo fitaovana finday rehetra - Android, iPhone, iPad, Blackberry ary maro hafa. Ny horonan-tsary, sary, audio, ary antontan-taratasy rehetra dia azo jerena na inona na inona ampidirinao, ary inona no fitaovana na browser no ampiasaina.
Fomba feno azo amboarina - Ny pejy votoatin'ny ISEBOX dia azo asiana marika amin'ny marikao, na marika an'ny mpanjifanao raha maso ivoho ianao. Ny zava-drehetra dia avy amin'ny safidin-tsoratra maro, logo, loko RGB / Hex, sary misy ambadika ary maro hafa.
Fitsinjarana mailaka - Ampidiro ao amin'ny ISEBOX ireo lisitry ny fizarana, ary avy eo mandamina fotoana na mandefasa ISEBOX Mailout. Ity dia mailaka kinova amina pejin-tranonkala ISEBOX iray ihany izay tsy miafara amin'ny lahatahiry spam, voamarika ho toy ny mailaka, na manentsina boaty misy boaty mavesatra. Handefa horonan-tsary eo amin'ny mailaka mihitsy aza izy rehefa tohanana.
Password Protected - Tsy vonona ho hitan'izao tontolo izao ny atiny? Miaro ny pejy ISEBOX sy ny atiny miaraka amin'ny teny miafina iray tsindrio. Tonga lafatra ho an'ny fanavakavahana haino aman-jery / mpanao gazety, fifandraisana anatiny mora, na fizotry ny fankatoavana ny mpanjifa.
Fiteny maro - Avoahy amin'ny pejin-javatra maro ny ISEBOX pejy misy anao: anglisy, frantsay, espaniola, alemanina, italianina, sinoa, portogey, ary tseky miaraka amina fiteny maro hafa hanampy amin'ny volana ho avy.
Mifanaraka amin'ny haino aman-jery sosialy - frontend dia natao hiasa sy ho malama toa ny sehatra sosialy ampiasaintsika isan'andro. ISEBOX dia manome anao safidy ahafahana miditra amin'ny tsindry sosialy tsindry iray ho an'ny mpampiasa misintona atiny. Rohy fizarana ara-tsosialy mora dia hafafin'ny ISEBOX koa.
Tags: mailakafamoahana hetsikaiseboxFivarotana finday sy tabletteSocial Media Marketing